I-Dogbox - iSearch
Qala ikhemisi ukuphulula inja Crate
Ngokuvamile, abangane abathandekayo abanezintambo ezinezinkampani kufanele bahambisane nabanikazi babo lapho behamba. Ngokwengxenye, ukuvakasha kwezilwane kungenakugwema. Kungakhathaliseki ukuthi kungani inja kufanele ihanjiswe, ukusetshenziswa kwe-a inja Crate Kunconywa kakhulu. Emotweni yangasese ukhonza ukuphepha kwenja nomshayeli. Ukuthutha ezokuthutha komphakathi, imithethonqubo yezinja zezinja kumele ibonwe.
Ulwazi olujwayelekile mayelana ne-dogbox
Kuneminye imigomo ngaphansi kweyiphi i-dogboxes eyaziwa. Babuye kuthiwa yizinja zezinja noma izinja zokuthutha izinja.
Ngokuyinhloko i-dogboxes yayenzelwe ukuthuthwa kwenja. Ukusetshenziswa kwalesi sigodi kuqinisekisa ukuphepha ngesikhathi sokushayela.
Ngokwengxenye, amabhokisi ezinja asebenza njengendlela yokubuyela enja enemilenze emine.
Kuye ngenhloso, amabhokisi enja kufanele akhethwe. Iqala ngokuhlola ukuthi ngabe yindaba yebhokisi lezinja eziphindiwe noma ezinokuthenjwa noma ngabe imiklamo eqinekile ifaneleka kakhulu. Zingenziwa nge-aluminium, inayiloni noma eplastiki. Ngamanye amamodeli amaningi kunamathuba amaningi okuphakama ngaphakathi kwezimoto.
Izinhlobo zezinja zezinja
Amabhokisini ezinja ezikhunjulwayo nezinyathelo aziswe ngezansi.
Ngamabhokisi ezinja ezinzima yizindlela zakudala zokuthutha izinja. Ngokuya ngobukhulu benja, isinqumo esibhekene nalokho kufanele senziwe. Ukuze inja encane ikhiqize amabhokisi ezinja epulasitiki afanelekile. Zenziwe ngedatha lokuthwala. Uma izinja zikhulu, noma kunjalo, i-aluminium impahla kufanele ikhethwe. Ngokusemthethweni, le mabhokisi enja anesimo esivame ukusetshenziselwa ukuhlala esihlalweni sangemuva noma emgodini wemithwalo.
Ngakho-ke, isibambo esithwalayo asiyona into ebaluleke kakhulu. Amamodeli ane-stripro ebaluleke kakhulu. Ngakho-ke ukuma okuphephile kusekelwa ngempumelelo. Ukuthutha okwedlule i-aluminium inja ebhokisini kumele ihlelwe. Uma uthenga, kufanele uqaphele ubuchwepheshe bokuvala obuhle ngamabhokisi ezinja ezinzima.
Amabhokisi amakhodi aqinile
Amamodeli afanelekayo afaneleke kakhulu ekuhambeni okuncane okuthutha kanye nezilwane ezincane. Ukuze uthole izinja ezikhudlwana, aziphephile ngoba izinto, njengeyiloni noma ipulasitiki, ayinamandla kakhulu. Ngisho nalapho uvala amabhokisi enja, i-zipper ayifanele.
Iningi labanikazi bezinja banquma ukusebenzisa amabhokisi ezinja ezikhunjulwa njengembhedi yenja.
Izinzuzo nezinkinga ze-dogbox
Njengoba kungabonakala ezinhlotsheni zezinja zezinja, zombili zinezinzuzo nezinkinga.
Okokuqala, izinzuzo zamabhokisi ezinja eziqinile futhi ezinokuthenjwa:
Izinzuzo zomnikazi wenja
Ukuze umnikazi wenja ibhokisi lezinja elihlengekayo libheke ngokwengeziwe futhi liyasebenza. Amamodeli aqinile anika izinga eliphezulu lokuphepha.
Izinzuzo zamagundane amane
Ukuthutha kukhululekile kakhulu inja emabhokisini ezinja eziguqulwayo. Ngokuvamile zikhululekile kangangokuthi zingasetshenziswa ekhaya. Ibhokisi elincane eliqinile lebhola lingase libekwe endaweni yezinyawo.
Izinkinga ezilandelayo zingaboniswa ngebhokisi lezinja eliqinile noma elihlelekile:
Izinkinga zomnikazi wenja
Ukuphepha kuqinisekiswe kuphela ngezinga elithile ekuthuthweni. Ngaphezu kwalokho, ikakhulukazi amamodeli angenakulinganiswa azinzile ngokwanele.
Izinkinga zamagundane amane
Ngaphezu kwakho konke izinja zesaba azizwa zingakhululekile ebhokisini lokuthutha inja. Ngakho-ke, izinguqulo eziguquguqukayo zibahle kakhulu kubo. Ngaphansi kancane uthanda i-dogbox ye-plastic.
Imfuneko yokuthenga i-dogbox
Izici ezintathu ezibaluleke kakhulu okufanele uzicabangele uma ukhetha ibhokisi lezinja.
Isinqumo sokuqala sokwenziwa sibukhulu bhokisi lejaji. Ngisho nemifushane emincane angeke ibe yijele. Uma ukhetha okufanelekile, inja kufanele ikwazi ukuma futhi ilale kahle. Noma kunjalo, lokhu kuyisitatimende esijwayelekile kuphela.
Abakhiqizi abaningi bezinja zezinja banikeza ulwazi, kusengaphambili noma ikakhulukazi emfanekisweni ofanele, okuyinto ikhi ezalisayo efanelekile. Kulesi simo inja ngeke kudingeke ilinganiswe. Uma kudingekile, izilinganiso ezintathu zizothathwa.
Ngesikhathi ubude benja, ikhala liyadluliselwa ubude benduku, kanye nengxenye yobude kusukela emilenzeni yangaphambili.
Ububanzi buphindwe kabili ububanzi bamahlombe.
Ukuphakama kulinganiswa kusuka kumapayipi kuya ezindlebeni zezindlebe kanye no-5 cm.
Ubukhulu obunjengobantu buyatholakala ebhokisini lokuthutha inja. Zilezi zilandelayo:
I-50 cm x 35 cm x 35 cm ihambisana nobukhulu S
I-60 cm x 40 cm x 40 cm ihambisana nobukhulu M
I-70 cm x 50 cm x 50 cm ihambisana nosayizi L
I-80 cm x 60 cm x 60 cm ihambisana nosayizi XL
I-90 cm x 70 cm x 70 cm ihambisana nosayizi XXL
I-105 cm x 70 cm x 70 cm ihambisana nosayizi XXXL
I-120 cm x 80 cm x 80 cm ihambisana nosayizi XXXXL
Ngesisekelo salezi zinkulu eziningi ibhokisi lezinja elifanele kufanele litholwe yonke inja enemilenze emine.
Endaweni yesibili yiyona nto yebhokisi lokuthutha inja. Zivame ukwenziwa ngo:
I-aluminium dogbox iqoqa pluses ngenxa yesisindo sayo esincane. Kulula ukuhlanza. Emotweni kusetshenziswe kahle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, isilinganiso esihle samanani / ukusebenza singacatshangwa.
Ukusetshenziswa kwebhokisi lokuthutha inja elenziwe ngeyiloni liguquguquka kakhulu. Uma i-dogbox ingasetshenziswa futhi kufanele ishiywe emotweni, ingagcinwa ukulondoloza isikhala. I-dogboxes eyenziwe nge-nayiloni inempilo kakhulu njengoba ingahlanzwa. Ngakho, izinwele zezinja ezicasulayo neziphunga elimnandi ziyanyamalala. Ikakhulukazi emakhilomitha amancane, izinja ezincane zikhululekile kakhulu. Zingasetshenziswa futhi njengenja yesikhasi sezinja.
Nakuba ama-dogbox e-aluminium ebiza kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izinto, enye yezinzuzo zawo yisisindo sabo esincane. Amaphuzu angaba yi-aluminium dogboxes inpunkto ukuphepha. Ziyamelana nokulwisana nokumelana nezimpande. Ngaphezu kwalokho, bavumela inja ukuthi ibonakale futhi iqinisekise ukuphumula okuhle.
Isisindo samabhokisi okuthutha inja sesivele sishiwo. Lesi sici kufanele sicatshangelwe uma siqhathaniswa. Uma imoto enemilenze emine, engena emotweni kuphela emotweni, lesi sici asibalulekile kakhulu. Uma inja kufanele igqoke ebhokisini ngaphezu kwebanga elide, isibonelo, kumgogqirha wezilwane, isisindo godu siya phambili. Isisindo semodeli ngayinye siboniswa ngokwehlukana.
Abakhiqizi abaziwayo bezinja zezinja
I-Lang yilona uhlu lwabakhiqizi bezinsiza zezinja. Abaningi ababuyekezi bakwethulwa kancane.
Ngokulinganisa "okuhle," ibhokisi lokuthutha le-aluminium elivela ku-Trixie lisikiwe.
I-Trixie yenkampani iye yabandakanyeka ekwakhiweni kwempahla yesilwane kusukela eminyakeni engaphezu kwe-40. Imikhiqizo ikhiqizwa ngothando olukhulu nokuqonda. Isibonelo esihle ibhokisi lokuthutha le-aluminium. Leli bhokisi lokuthutha lihlaba umxhwele ngezici eziningi ezinhle. Lokhu kuqala ngokuhlanganiswa kwezinto ezihlukahlukene. Ukukhanya yi-aluminium. Okuthakazelisayo ngamagundane amane kukhona phansi kwezinkuni. Le modeli yenzelwe imigwaqo emikhulu ye-ventilation kanye ne-thermo inset. Umnyango utholakala phambili ngaphambili futhi unesivinini esivela ngokushesha.
Isikolo sokuhlola "okuhle" sithole ibhokisi lokuthutha elenziwe nge-plastic kusuka kumakhi Kerbl.
I-Kerbl yenkampani iye yaziwa kusukela esikhathini se-55 iminyaka uma ifika emibuthanweni mayelana nezidingo zesilwane. Kukhona uhla olukhulu lwemikhiqizo etholakalayo ezifuywayo kanye namahhashi. Ngamabhokisi okuthutha epulasitiki, izimfanelo ezilandelayo zikholisa kumakhasimende.
I-Gulliver dogbox yamukelwe kusuka kunokwenzeka izinkanyezi ze-5 izilinganiso ze-4,5. Izindleko ze-IATA (International Air Transport Association) zihlangene, ngakho-ke nazo zifanelekile ukuhamba emoyeni. Okungeziwe kulokhu ibhokisi lokuthutha lifanelekile ukukhuluma. Uma ukuthutha kuthatha isikhathi eside, indebe kanye nesitoreji sendawo yokugcina impahla kunika induduzo emotweni emine enemilenze. Ingahle futhi ilandelwe ngokuzithandela ngamasondo.
Ukubuyekezwa kwamakhasimende okuvelele ebhokisini lokuthutha lezinja elihlengekayo elenziwe nge-nylon kusuka ku-Hunter.
Kusukela ekusungulweni kwayo ku-1980, izindawo ezikhethekile zenkampani eyaziwayo uHunter ziyizidingo zezinja namakati. Imfashini futhi isebenza yizinto eziphezulu zekhwalithi.
I-dogbox eyenziwe nge-nylon isilula ukusetha. Kungaba ukuwa ukuze ulondoloze isikhala futhi kulula ukuyihlanza. Amapulangwe epulasitiki aqinisekisa ukuma okuphephile kanye nokuphatha okuhambayo okunethezeka.
Esinye isibonelo sokuthutha okuphephile yinkampani Karli ebhokisini inja yebhayisikili yebhayisikili. Kukhona iminyaka engaphezulu kwe-40 yokuhlangenwe nakho kulo mkhakha. Amabhokisi ezinja, amakolishi kanye nokunye okunjalo, akhiqizwa ngekhwalithi engcono kakhulu futhi esebenzayo kakhulu.
Ukuhluka okuhluke ngokuphelele kokuthuthwa kwezilwane ezinemilenze ezine, ukuze uchithe ndawonye isikhathi sokuzilibazisa i-trailer yensiza yebhayisikili yi-Karli. Lezi zithombe zenzelwe izinja ezinesisindo kufika ku-40 k. Ungakwazi, ikakhulukazi lapho isimo sezulu siphenduka ngaphansi kwe-nylon hood, efuna ukuvikelwa.
Imibuzo evame ukubuzwa mayelana nama-dogboxes
Umbuzo 1: Kungani amabhokisi e-dogbox ebaluleke kangaka ekuthuthweni, ikakhulukazi emotweni?
Amabhokisi okuthutha abalulekile kokubili inja nomshayeli. Inja, uma yayijwayele ibhokisi, ibona indawo eyaziwayo yokuhlala. Uma ukushayela okunamandla kuyadingeka esimweni esiyingozi, inja ingaba isibhamu ngaphakathi kwemoto. I-ADAC ithole ukuthi ingozi yokulimala kumshayeli, umngane kanye nenja yanda kakhulu. Ukunethezeka nokuphephile kakhulu ukushayela imoto nebhokisi elifanele lebhokisi.
Umbuzo 2: Ingabe ukuthuthwa kwezinja eziningana ebhokisini kungenzeka?
Empeleni, ibhokisi linikezwa inja. Noma kunjalo, ekuhwebeni kunikezwa izinja zezinja, ezihlukaniswe phakathi futhi zibe nesayizi elihambelanayo. Izinja ezimbili zingathathwa kulezi zibhokisi zezinja. Kodwa lokhu kuhluka kufanele kusetshenziswe kuphela uma kungekho okunye okungenzeka. Ngisho noma inja ithanda ukushayela, kusho ukucindezeleka kuye. Uma umuntu esengaphakathi ebhodini, lokhu ukucindezeleka kungadluliselwa futhi kuholele ekuziphatheni okungavumelekile ukulwa.
Umbuzo 3: Iyiphi indima ebusayo ibhokisi lokuthutha lejaji?
Lapha kumele sithole impilo enempilo. Uma ibhokisi lincane kakhulu, ukugibela inja kuyaqeda futhi kungakhululekile. Ibhokisi elikhulu lokuthutha inja elikhulu lifaka ingozi yokuthi inja izophonswa emuva nangaphandle ebhokisini uma kwenzeka ingozi.
Umbuzo 4: Kuthiwani ngokufaka umshwalense?
Amanga ukucabanga ukuthi ibhokisi lezinja liholela ngokuzenzakalelayo embukisweni womshuwalense lapho kwenzeka ingozi. Uma ku-footwell, isibonelo, inkampani yomshuwalense ayilawuli umonakalo owenziwe. Imithethonqubo yemigwaqo emgwaqeni e-§ 23 ichaza ngokucacile ukuthi umshayeli unesibopho sokuvikela umthwalo kahle. Nakuba inja iyisidalwa esiphilayo, kubhekwa njengecala kulokhu. Njengomthetho, akukho ukulimala komshuwalense okucatshangwa, lapho inja ibonwe njengesizathu. Konke kubaluleke kakhulu ukugcina izinja emabhokisini ezinja ezifanele ngenkathi ushayela.
Umbuzo 5: Iyiphi indima yokusebenza, ukuhlanza, izesekeli nezindleko, uma uthenga izinja zezinja?
Okubalulekile, okuye kwachazwa ngokuningiliziwe, kuzokukhethwa ngendlela yokuthi igcwalise ngokuyinhloko ukuphepha. Kufanele kufaniswe nokuzalwa kwenja kanye nokusetshenziswa okuhlosiwe. Lezi zinto nazo zithinta ngezinga elithile ukuhlanzwa kwebhokisi lokuthutha. Lokhu kufanele kube okulula ngoba njalo, kuhle kakhulu emva kokusetshenziswa konke. Endabeni yokunamathiselwe, izinamathiselo, izingubo zokugcoba nokunye okumele kucatshangelwe. Ungakhohlwa intengo. Nazi imiphumela yokuhlolwa okuningi kwebhokisi lezinja eliwusizo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukuqhathaniswa kwenani lentengo-ukusebenza kungenziwa kwikhompyutha.
Amabhokisi ezinja alula kakhulu ukuthatha inja nawe. Kungakhathaliseki ukuthi uzohamba yini, iholidi noma ukuvakashela udokotela wezilwane. Uma uthenga, inzalo yezinja kufanele isekelwe ekukhethweni kwebhokisi lezinja. Kusukela kubukhulu bezinja kudingekile ukucubungula ukuthi yikuphi ukwaziswa okufanelekile nokuthi iyiphi imodeli efanelekile usayizi.
Isihloko sangaphambiliniIsembozo sokuhlala esihlalweni sobukhosi
Isihloko esilandelayosokuprakthiza lochwepheshe